Fiaram-panjakana : Nanome ohatra amin’ny takelaka mena ny Primatiora -
AccueilSongandinaFiaram-panjakana : Nanome ohatra amin’ny takelaka mena ny Primatiora
Fiaram-panjakana : Nanome ohatra amin’ny takelaka mena ny Primatiora
14/07/2018 admintriatra Songandina 0
Ho foana ny fampiasana ny fiaram-panjakana amin’ny filàna manokana. Araka ny nambaran’ny praiminisitra Ntsay Christian, tamin’ny fandaharan’asan’ny governemanta teny amin’ny Antenimieram-pirenena, dia tsy maintsy havadika miloko mena avokoa ny takelaka nomeraon’ny fiaram-panjakana. Izany no atao hoy izy, mba hisorohana amin’ny fampiasana azy ireny amin’ny filàna manokana sy amin’ny zava-dratsy, sns.
Noho izay indrindra, dia nanome ohatra ny teny anivon’ny Primatiora. Nohazavain’ny tompon’andraikitra iray eny anivon’ity andrim-panjakana iray ity, efa navadika ho takelaka mena avokoa ny takelaky ny nomeraon’ny fiaram-panjakana eo anivon’izy ireo. Toraka izany koa ireo minisitera sasantsasany toa ny eo anivon’ny minisiteran’ny Paositra, ny minisiteran’ny Fitsarana, sns. Tsiahivina mantsy fa iray volana ny fe-potoana nomen’ny lehiben’ny governemanta hamadihana ny takelaky ny fiara-panjakana ho loko mena. Amin’izao fotoana izao, dia roa herinandro amin’io fe-potoana io izay no lasa, efa saika namadika tsikelikely ny takelaky ny nomeraon’ny fiaram-panjakana ho mena avokoa ny eny anivon’ireo departemanta ministerialy.
Nambaran’ny tompon’andraikitra eny amin’ny Primatiora ihany fa mbola tsy manana ny statistika mahakasika ny famadihana ny takelaky ny fiaram-panjakana ho mena izy ireo. Ny hany nohazavain’izy ireo dia anjaran’ny minisitera tsirairay avy no manokana tetibola ho amin’izany. Mbola tsy misy ihany koa anefa ny fepetra manokana mahakasika ireo mbola tsy mamadika izany ao anatin’ny fe-potoana voatondro.
Tsikaritra kosa anefa fa efa saika ahitana naoty sy peta-drindrina mahakasika io famadihana ny takelaky ny fiaram-panjakana ho miloko mena io avokoa eny amin’ireo departemanta minisiterialy sy ireo sampandraharaham-panjakana rehetra.
Vakivava ny amin’ny fifampitsabahana andraikitra ireo mpisolovava raha mandinika ny raharaha misy eo anivon’ny fitsarana. Raha fehezina ny fanazavana noentin’ny bâtonnier Raharison Hubert omaly, dia samy nanao izay tiany atao sady baranahana ny fomba fiasa ...Tohiny